FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA YORKIE-APSO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Yorkie-Apso
Alika mpihetsiketsika mifangaro Yorkshire Terrier / Lhasa Apso
'Ity no Cody my lahy Lhasa Apso / Yorkie mifangaro amin'ny 1 taona milanja 16 pounds avy amin'ny Sunny Terrace Kennel. Izy no bandy kely eritreritra indrindra. Amin'ny alina dia omeny 'fanasan-tarehy' feno aho ary raha miala eo imasony aho, na dia vetivety fotsiny aza dia hajanony ny zavatra ataony ary hitady ahy izy hahitako raha tsara aho. Volom-pitiavana lehibe fotsiny izy. '
Ny alika Yorkie-Apso dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Yorkshire Terrier ary ny Lhasa Apso . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Cody ilay lehilahy Lhasa Apso / Yorkie mifangaro amin'ny 1 taona milanja 16 pounds avy amin'ny Sunny Terrace Kennel.
laboratoara sy chow afangaro alika kely
'Cody ilay lahy Lhasa Apso / Yorkie mifangaro amin'ny 1 taona milanja 16 pounds avy amin'i Sunny Terrace Kennel. Ity sary ity dia nalaina taorian'ny volon-dohany. Toa tsy mampaninona azy izany, mafana be ny fahavaratra eto! '
Bibi the Yorkie Apso puppy amin'ny 3 1/2 volana.
'Daisy ity. Alika kely Yorkie Apso 8 volana izy. Ny reniny dia Yorkshire Terrier ary ny rainy dia Lhasa Apso). Izy no alika kely voalohany ary printsy vavy kely aho. Kely izy nefa be ny feony, na dia mibontsina fotsiny aza izy rehefa misy mandalo eo am-baravarankely na mandondom-baravarana. Toa somary marani-tsaina izy ary mora nampiofana. Izy, toa an-dry Rufus Maltichon zandriny lahy, dia tia mifamihina nefa matanjaka be. Ny kilalao ankafiziny dia ny baoliriny mikotrokotroka milalao fakana tsy tapaka ary mamerina izany amin'ny rambony mihodina. Tena mahafatifaty izy ary izay mahita ahy mandehandeha amin'ny heviny momba ny hatsarany sy manontany hoe iza izy, satria mazava ho azy fa tsy Yorkshire Terrier feno noho ny sofina mikorisa sy ny rambony miforitra eo an-damosiny. Mandeha an-tongotra antsasak'adiny isan'andro izy manodidina ny farihy eo an-toerana miaraka amin'i Rufus zokiny lahy, saingy manao vazivazy izahay milaza fa toy ny zana-kazo Duracell izy satria afaka mandeha foana mandrakizay! Izy tokoa no lehiben'ny roa tonta satria nahazo azy roa volana talohan'ny nahazoantsika an'i Rufus ka izy no mibaiko ny akoho. Saingy tena nalainy tsara izy ary tena faly izahay fa tafaraka izy ireo ary tena mifankatia. Izy koa dia tena tsara amin'ny ankizy ary mifamatotra indrindra amin'ilay zanak'anabavinay Riley fotsiny ny filazany fa ny anarany no mampandeha ny rambony. Toa nahazo ny toetra tsara indrindra tamin'ny karazany roa i Daisy ary manampy azy hanana toetra tsara ny reniny sy ny dadany. Alika mamiratra izy. '
sary fivontosana sela mast alika
Daisy the Yorkie Apso puppy amin'ny 8 volana.
Layla, Yorkie-Apso amin'ny 11 volana, milanja 6,5 ​​pounds— 'I Lhasa Apso no reniny ary i Yorkshire Terrier ny rainy.'
Ankizy Yorkie-Apso, 8 taona, avy amin'ny renin'i Lhasa Apso sy ny dadan'i Yorkie. Sary natolotry ny Sunny Terrace Kennel
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Yorkie-Apso
omby any anaty orona manga amerikana
alika kilalao rosiana amidy
bulldog afangaro amin'ny pitbull
mena merle aostraliana mpiandry sisin-tany collie mix